Soomaaliya, 07 July 2019
Cawad: Soomaaliya waa hal dal iyo hal dad
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta diblamaasiyiinta ku sugan Muqdisho u sheegtay, in aysan aqbali doonin in maamulada ka jira dalka loola dhaqmo sida dowlad oo kale.
Barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Daandurey iyo Casha Ibrahim Aden (Casha Cud).
Barnaamijka Dhacdooyinka Todobaadka, waxaa soo jeedinaya Jamal Axmed Cisman.
Somaliland oo ka hadashay go'aanka DFS ee Guinea
Sidii aad idaacadeennii xalay fiidkii aad ku maqasheen, dowladda Soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday inay xiriirka diblomaasiyadeed u jartay dalka Galbeekda Afrika ku yaala ee Guinea.
Faaqidaadda: Xuquuqda Muwaaddinnimo ee Soomaalida-Kenya
Ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, oo aan maanta ku eegi doonno cabashooyinka ku aaddan xuquuqda muwaaddinnimo ee Soomaalida Kenya.
Safiir Kaalmooy oo baaq u direy dhalinyarada u tahriibeysa Liibya
Safiirka Soomaaliya u jooga dalka Liibiya ayaa ugu baaqay dhalin-yarada Soomaalida ee u safraya dalka Liibiya inay go’aankaasi ka fiirsadaan.